XOG: Kooxda Everton oo mowqifkeedii Deulofeu kasoo debacdey – Gool FM
XOG: Kooxda Everton oo mowqifkeedii Deulofeu kasoo debacdey
Raage January 19, 2017
(Milano) 19 Jan 2017 – Sida ku dhigan Sky Sport Italia, Everton ayaa ogolaatay in ay Gerard Deulofeu amaahiso kooxda AC Milan iyadoo siinaysa dookh ay ku iibsan karto hadhoow.
Guddoonka Rossoneri ee Adriano Galliani ayaa shalay sheegay in Toffees aysan wiilka soo fasaxaynin iyagoon ku xirin shuruud iibsi ah, yeelkeede ninka ku xeel dheer suuqa kala iibsiga ee Gianluca Di Marzio ayaa soo jeediyay in Everton ayaa haatan diyaar tahay inay laacibka amaahiso iyadoo Milan siinaysa dookh ay hadhoow ku iibsato, halkii ay markii hore taasi ka ahayd waajib.
Arrritan ayaase waxaa ku jirta Barcelona, oo laacibka ku leh shuruud ay dib ugu iibsan karto, balse uma muuqdaan kuwo arrintan sidaa uga walaacsan, iyadoo ay haatan caqabadda jirtaahi ay tahay in tibxaha heshiiska lala gaaro Milan.
Yeelkeede, Mediaset Premium ayaa qoraya in AS Roma ay sidoo kale isu diyaarinayso inay kusoo noqoto hardanka Deulofeu, waloow marxaladdan la joogo ay u muuqato inuu laacibku doonayo oo qura kooxda AC Milan.
HOR DHAC: Algeria Vs. Tunisia
Sida ay u ekaan karto kaartada Mourinho hadii uu la soo wareego Antoine Griezmann